Sigwetshwe iminyaka engu-30 isisulu sokudlwengulwa ngemuva kokubelethela ethoyilethi | News24
Sigwetshwe iminyaka engu-30 isisulu sokudlwengulwa ngemuva kokubelethela ethoyilethi
El Salvadorian – Intombazane eneminyaka engu-19 ubudala izojeza kanzima ngomphumela wobugebengu obenziwa kuyona, kubika iW24.
IThe Guardian ibike ukuthi u-Evelyn Beatriz Hernandez Cruz, oyintokazi eniminyaka engu-19 ubudala yase-El Salvador, eCentral America, eyadlwengulwa iphindelelwa yilungu leqembu lezigelekeqe maqede yakhulelwa ngenxa yalokho kudlwengulwa, igwetshwe iminyaka engu-30 ibhadla ejele ngemuva kokubeletha ingane esishonile ngenxa yezinkinga ezaba khona ngesikhathi ikhulelwe.
U-Evelyn uthi yena wayengazi ukuthi ukhulelwe ngesikhathi eqala ukuzwa ubuhlungu obukhulu eqolo kanye nasesiswini nalapho agcina ebelethele ethoyilethi esikoleni ayefunda kuso samabanga aphezulu.
Ongoti bahluleka ukuthola ukuthi le ngane esishonile yashonela esibelethweni noma yashona ngemuva kokuphuphuma kwesisu. Kodwa noma kunjalo, ijaji ligwebe u-Evelyn ngecala lokuba nenhloso yokubulala ngoba wahluleka ukunakekela ingane ngendlela efanele ngaphambi kokuba izalwe.
OLUNYE UDABA: Ugogo ezinsolweni 'zokudayisa' ngabazukulu emadodeni amadala
Abashushisi bathi kungenzeka ukuthi ingane yashona ngemuva kokubelethwa.
I-El Salvador yizwe lapho ukukhishwa kwesisu kungekho emthethweni, kungakhathalekile ukuthi kungaphansi kwaziphi izimo. Lokhu kusho ukuthi abesifazane bangabekwa icala lokukhipha isisu ngisho noma ngabe kungenxa yokudlwengulwa, ukudlwengulwa yilungu lomndeni noma isihlobo esiseduze, ukukhipha isisu uma kubonakala ukuthi ingane angeke ikwazi ukuphila noma esimweni lapho impilo kamama isuke isebungozini ngenxa yokukhulelwa.
U-Erika Guevara-Rosas, wenhlangano i-Amnesty International, uthi ukungavumeleki nhlobo kokukhishwa kwesisu e-El Salvador kuphula amalungelo abesifazane okuphila, ezempilo, ukuba nesikhathi sangasese, inkululeko yokungacwaswa, ukuhlukunyezwa kanye nokunye ukungaphathwa kwahle.
Le nhlangano inxusa ukuba kukhishwe emajele ngokushesha bonke abesifazane ababoshelwa ukukhipha izisu bese kuvalwa nomthetho owenza kube yicala ukuhushula isisu.
Iqhuba ithi abantu besifazane abasebasha kanye nezisulu zokudlwengulwa abakutholi ukwesekwa futhi okunalokho baphathiswa okwezigebengu baphinde bashushiswe.